निरु न्यौपानेको कृति उपन्यास,गजल र गीत एकसाथ लोकार्पण – NamoBuddha Khabar
मंगलबार, आषाढ ०७, २०७९ | २२:४१:०७ |
काठमाडौं–निरु न्यौपानेको दुई कृति र एउटा गीत एकै दिन लोकार्पण गरिएको छ । काभ्रेकी बहुमुखी प्रतिभा न्यौपानेद्धारा लिखित उपन्यास ’अर्को अध्याय’ र गजल ’सिरानीको तस्बिर’ का साथै गीत लोकार्पण गरिएको हो ।
हालै काठमाडौँको लेखनकुञ्जमा आयोजना गरिएको लोकार्पण कार्यक्रममा कवि तथा गीतकार रमेश पौडेलले निरु न्यौपाने एउटा राम्रो कलमका रुपमा चिनेको बताउनुभयो । उहाँले काभ्रेले एउटा नयाँ सर्जक पाएकोमा काभ्रेलीहरुलाई बधाई दिनुभयो ।
कृति लोकार्पणका क्रममा काभ्रेली साहित्यको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै न्यौपानेको उपन्यासमा नेपालदेखि विदेशीएको अनुभव रहेको र लेखक आफै पनि विभिन्न देश पुगेर संघर्ष गरेका कारण गहकिलो र पठनयोग्य किताब पाएको उहाँको भनाई छ ।
समालोचक ज्ञानु अधिकारीले उपन्यास पारिवारिक, मानव सम्वेदनाको कृति भएको बताउनुभयो । उपन्यासमा माया,विश्वास, सम्बन्ध मुख्य रहेको र एकपटक पढ्न बसेपछि उठ्न मन नलाग्ने उहाँको प्रतिक्रिया छ । उपन्यासमा महिला सम्वेदनालाई मिहिन ढंगले प्रस्तुत गरिनु तथा सबै पुरुष गलत नदेखाउनु लेखकको सबल पक्ष भएको उहाँको तर्क छ ।
उपन्यास नेपाली महिलाको यथार्थ भएको साहित्यकार तथा समीक्षक रेणुका सोलुले बताउनुभयो । ‘अर्को अध्याय’ नेपाली महिलाले दुलही भएर भित्रिएबाट सुरु भएको विभेददेखिको कथा रहेको बताउँदै उहाँले यसले नेपाली समाज र महिलालाई प्रस्तुत गरेको दाबी गर्नुभयो ।
यौनमात्रै ठूलो कुरा नभएको,विदेशको भोगाइ,पितृसत्तामाथि उठाएको प्रश्न, बिहे आफैमा नराम्रो हैन, छोरालाई नैतिक शिक्षा दिनुपर्छ लगायतका कुराहरू उपन्यासको राम्रो पक्ष रहेको रेणुको भनाई छ ।
यसैगरी ’सिरानीको तस्बिर’ गजल धेरै राम्रो गजल भएको वरिष्ठ गजलकार ललिजन रावलले बताउनुभयो । यसमा विषयक विविधता धेरै रहेको र पाठकले गजलमा नौलोपन पनि भेट्ने दाबी गर्नुभयो ।
प्रा.डा. सबित्री कक्षपतीले गीत राम्रो बनेको बताउनुभयो । ’लेखन उत्पादन हो, उत्पादन निर्माण हो । यसरी नै गीत, भिडियो निर्माण हुन्छ । भिडियो राम्रो छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सर्जक न्यौपानेले आफूलाई किताब लेख्न समर्थन तथा प्रोत्साहन गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिंनुभयो । उहाँले विविध परिस्थितिले आफूले चाकेको समयमा कृति बाहिर ल्याउन नसकेको बताउँदै अब भने निरन्तर साहित्य कर्ममा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा न्यौपानेकै गीत ’हिसाब किताब’ बोलको गीत पनि सार्वजनिक गरिएको हो । गीत राज सिग्देलको संगीतमा सिग्दैले नै गाउनुभएको हो । अनुप चापागाईको निदर््शन रहेकोे भिडियोमा गरिमा शर्मा र जीवन भट्टराईको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
प्रेम–कर्म फाउण्डेशनको आयोजनामा रामशरण न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागि प्रा.डा. सावित्री कक्षपति,साहित्यकार रेणुका सोलु, वरिष्ठ गजलकार ललिजन रावल, समालोचक ज्ञानु अधिकारी, कवि तथा गीतकार रमेश पौडेल लगायतका व्यक्तित्वहरुले धारणा राख्नुभएको हो ।
गीत यस्तो छ :